बराह मन्दिरमा पर्यटन काब्ययात्रा::Online News Portal from State No. 4
बराह मन्दिरमा पर्यटन काब्ययात्रा
बागलुङ, ६ मंसिर — कात्तिके पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित बराह पूजा तथा पर्यटकीय मेला भकुण्डेमा शुरु भएको छ । बुधवार देखि शुरु भएको मेला शुक्रवार सम्म चल्नेछ । मेलाको पहिलो दिन पर्यटक काब्य यात्रा , नगर स्तरीय अन्तर मावि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र म्याराथुन दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन् । पर्यटन काब्य यात्राले भकुण्डेको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको सहभागिले बताए । यो नौलो अभियानले भकुण्डेका बहुआयामिक क्षेत्रको पहिचानका लागि साहित्यकारले जीवन्तता दिएको बताए । धौलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काजी रोशनको अध्यक्षता, सचिव राम थापा अविरलको संचालन र सदस्य गुणराज पौडेलको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा संगीतकार बिवि अनुरागी, डा. दिनबहादुर थापा, हरिप्रसाद पाण्डेय, सरोजराज गौतम, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिल शिरिष, युवा नेता लालबहादुर थापा, शिवशर्मा, पत्रकारहरु कोपिला कंडेल, सिर्जना पन्त, अन्य साहित्यीक व्यत्तित्व अनिल शर्मा, शिव शर्मा, सुमन श्रापित लगायतले आफ्ना रचना बाचन गरेका थिए । हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता तर्फ १५ विद्यालयले भाग लिएकोमा सिद्धार्थ शिक्षा सदन प्रथम, विद्यामन्दिर मावि द्वितिय र गणेश मावि बलेवा तृतिय भएका थिए ।
मेलाकै अवसरमा पञ्चेवाजा, छेलो हान्ने, स्लो वाईक रेश, कलश यात्रा, बराह भगवानको पूजा, बराह तालमा तोरण तार्ने लगायतका कार्यक्रम समेत राखिएको आयोजकले बताए । मेलालाई बराह मन्दिर र ताल व्यवस्थापन तथा संरक्षण समितिले संयोजन गरेको छ । हरेक बर्ष कात्तिक पूर्णिमाको अवसरमा यहाँ मेला लाग्ने गरेको छ । साथै नियमित पूजा आजा समेत हुने भएकोले भकुण्डेमा धेरै आन्तरिक पर्यटक पुग्छन् । होम स्टे संचालन, हिमाली ऋखलाको दृ्रश्याबलोकन लगायतको कारणले पर्यटकको रोजाईमा भकुण्डे पर्छ ।